Dowladda Somalia oo Guddi U Saartay Baadhitaanka Weerarkii Xabsiga Dhexe Ee Muqdisho | Gaaroodi News
Dowladda Somalia oo Guddi U Saartay Baadhitaanka Weerarkii Xabsiga Dhexe Ee Muqdisho
August 11, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Xabsiga dhexe ee Xamar
Sii hayaha xilka ra’isul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo baaraya sababta keentay iska hor’imaadkii dadka badan ay ku dhinteen ee shalay galinkii dambe ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho iyo sida ay ku suurtagashay in koox maxaabiis ah inta ay hub qaataan kadibna ay dagaalamaan.
Warqad kasoo baxday xafiiska kusimaha Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddigan la faray in muddo 10 cisho gudahood ay kusoo gabagabeeyaan howsha baarista.
“Haddana waxaa socdaa baaritaan, baaritaankaas oo la xiriira falkaas habkii uu ku dhacay iyo sida uu u dhacay waxaan rajeyneynaa in lasoo gabagabeyn doono baaritaankaas, waxaan kale rajeyneynaa cid allaale ciddii arrimahaas fududeeysay in hubkaas ay gacanta u galaan nimanka oo rabshadaha halkaas ka kiciyay waxaa lagu qaadi doonaa sharciga waxaana la horgeyn doonaa sharciga” ayuu yiri wasiirka caddaallada, Xasan Xuseen Xaaji oo la hadlayay telefishinka dowladda.
Su’aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sababtii horseedday dagaalkii dhimashada iyo dhaawaca sababay ee shalay dhex maray ilaalada Xabsiga Dhexe ee Xamar iyo qaar ka mid ah maxaabiista.
Ugu yaraan 10 ruux oo lasoo tabiyay inay halkaas dhinteen ayaa isugu jiray maxaabiis iyo ciidanka asluubta ee xabsigaas amnigiisa suga.
Wasiirka Caddaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, oo la hadlay warbaahinta dowladda, ayaa sheegay in la baadhayo sida uu hubka ku galay gacanta maxaabiista.
“Waxaa socda baadhitaan la xiriira habkii uu falkaas ku dhacay iyo sidii uu u dhacay, waxaana rajeyneynaa in lasoo gabogabeyn doono baadhitaankaas. waxaan kaloo rajeyneynaa in cid walba oo fududeysay in hubkaas uu gacanta u galo nimankaas rabshada kiciyay lafu qaadi doono la horgeyn doono sharciga”. Wasiirka Caddaaladda ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji
Abuukaate Xasan Xuseen ayaa intaas ku daray in dhawaan shacabka loo soo gudbin doono natiijada baadhitaankaas.
Wasiirkada Caddaaladda si rasmi ah carrabka uguma uusan dhufanin inay jiraan dad fududeeyay in maxaabiista gacantooda uu hubka galo, laakiin wuxuu sheegay in la baadhayo arrintaas.
Hoggaanka ciidamada Asluubta ee Soomaaliya ayaa dhankooda faahfaahin dheeri ah ka bixiyay dagaalkii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho.
“Maxbuus ayaa qori la qabsaday askari”
Taliyaha ciidanka Asluubta ee Soomaaliya, Janaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ayaa sheegay in wax walba ay ka billowdeen “Maxbuus qori la qabsaday askari”.
“Maxaabiistii shaqeyneysay, oo gudaha ku jirtay, gaar ahaan kuwii raashinka karinayay, ayaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula jiray, howshana la waday. Nasiib wanaag si fudud ayuu qoriga gacantoodii ku galay, kaddibna waxay billaabeen dagaal,” ayuu yidhi taliya. Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliya Janaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Mar haddii ay gudaha xabad ka billaabatay, dagaalkii wuxuu sababay dhimasho iyo dhaawac. Islamarkii waxay boobsiiyeen askari labaad oo kor saarnaa, markii ay toogteen ayuuna soo dhacay askarigii, sidaasna qoryihii gacantooda galay waxay noqdeen labo, labadii qori ayeyna ku dagaal galeen.”
Ciidamada amniga oo howlgal ka fuliyay xabsiga dhexdiisa ayaa markii dambe ku guuleystay inay qalalaasahaas soo afjaraan.
Afhayeenka wasaaradda Warfaafinta, Ismaaciil Mukhtaar ayaa sheegay in lix ka mid ah maxaabiistii dagaallameysay ay halkaas ku dhinteen, halka lix kale la dhaawacay, afarna la qabtay.
Ilo xog-ogaal ah oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in ugu yaraan afar ka mid ah ilaalada xabsiga, oo ka tirsanaa ciidanka Asluubta ay ku dhinteen dagaalkaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xoojin doono hannaanka lagu sugo amniga xabsiyada.
Wasiirka Caddaaladda ayaa xaqiijiyay in haddaba la billaabay hab-raacyo hor leh oo lagu ilaalinayo xabsiyada iyo maxaabiistoodaba.